UEnoki Wahamba NoThixo
SIBHALELE OKANYE USIFOWUNELE
Kutheni Kufuneka Ufunde IBhayibhile?
Ndinokwenza Njani Ukuze Ndiqalise?
Yintoni Enokwenza Ube Nomdla Wokuyifunda?
IBhayibhile Inokubuphucula Njani Ubomi Bam?
Ngaba Kukungaqondi Nje?
IsiSesotho (South Africa)
IsiTshayina (Esenziwe Lula)
IMBONISELO NO. 1 2017
XELISA UKHOLO LWABO | UENOKI
UENOKI waphila ixesha elide. Kusenokuba nzima ukukholelwa oku, kodwa le ndoda yaphila iminyaka emalunga ne-365, iminyaka emide kakhulu xa kuthelekiswa nesiyiphilayo ngoku! Sekunjalo, ngexesha lakhe wayengekabi mdala kangako. Ngaloo maxesha, kwiminyaka engaphezu kweyi-5000 eyadlulayo, abantu babephila ixesha elide kakhulu kunelethu. UAdam owayengumntu wokuqala, wayesele ephile iminyaka engaphezu kwamakhulu amathandathu xa kwakuzalwa uEnoki, waza waphila engamakhulu amathathu emva kokuzalwa kwakhe! Abanye abantwana baka-Adam baphila iminyaka engaphezu koko. Ngoko, xa wayeneminyaka eyi-365, uEnoki ufanele ukuba wayesenamandla. Wayenjengendoda eseze ngobuso ezweni. Noko ke, kwakungekho njalo.
UEnoki wayebona ngathi uza kubulawa. Yiba nombono wakhe ebaleka, ecinga ngabantu athethe nabo ngomyalezo ovela kuThixo. Babelugcwabevu ngumsindo, bemthiye egazini uEnoki. Babewudelela umyalezo kaEnoki, ibe babengafuni nokumbona uThixo owayemthumile. Babengenakukwazi ukuhlasela uThixo kaEnoki, uYehova, kodwa babekwazi ukuyihlasela le ndoda! Mhlawumbi uEnoki wayezibuza enoba wayeza kuphinda ayibone na intsapho yakhe. Ngaba wayecinga ngomfazi wakhe, iintombi zakhe, unyana wakhe uMethusela okanye umzukulwana wakhe uLameki? (Genesis 5:21, 23, 25) Ngaba esi yayisisiphelo sakhe?
Into emangalisayo kukuba zintathu kuphela iZibhalo ezithetha ngoEnoki eBhayibhileni. (Genesis 5:21-24; Hebhere 11:5; Yude 14, 15) Sekunjalo, ezo Zibhalo zikwenza uyibone indlela eyayinokholo ngayo le ndoda. Ngaba uyayisebenzela intsapho yakho ukuze ifumane izinto eziyimfuneko? Ngaba kwakha kwafuneka umele into elungileyo ebunzimeni? Ukuba uthi ewe, usenokufunda okuninzi kukholo lukaEnoki.
“UENOKI WAHLALA EHAMBA NOTHIXO OYINYANISO”
Ngexesha likaEnoki, abantu babebabi. Wayesisizukulwana sesixhenxe ukusuka kuAdam. Kwakungekadluli xesha lingako uAdam noEva bephulukene nemfezeko. Yiloo nto abantu babesaphila iminyaka emininzi. Sekunjalo, babeziphethe ngendlela emasikizi yaye bengenaxesha lokwenza ukuthanda kukaThixo. Kwakugqugqise ugonyamelo. Olo gonyamelo lwaqalisa kwisizukulwana sesibini, xa uKayin wabulala umninawa wakhe uAbheli. Kubonakala ngathi abanye kwinzala yakhe babezingomb’ isifuba ngokuba nogonyamelo nenkohlakalo engaphezu kwakhe! Kwisizukulwana sesithathu kwaqalisa obunye ububi. Abantu bazibiza ngegama likaYehova, kodwa bengamhloneli. Eli gama lingcwele babelisebenzisela nje ukumnyelisa.—Genesis 4:8, 23-26.
Mhlawumbi abantu abanjalo baxhaphaka kakhulu ngexesha likaEnoki. Njengoko wayekhula, kwafuneka akhethe. Ngaba wayeza kuhamba nabo bantu okanye wayeza kufuna uThixo oyinyaniso, uYehova, owenza amazulu nomhlaba? Mhlawumbi wayithanda kakhulu ingxelo awayifunda ngoAbheli, owafela ukholo ngenxa yokuba wayenqula ngendlela ethandwa nguYehova. UEnoki wakhetha ukuzeka mzekweni. KwiGenesis 5:22 sixelelwa oku: “Wahlala ehamba noThixo oyinyaniso.” Ewodwa nje loo magama abonisa ukuba uEnoki wayemthanda uThixo nakubeni wayephila nabantu abangamhloneliyo. Ngumntu wokuqala iBhayibhile ethetha ngaye ngolu hlobo.
Kwale vesi ithi uEnoki wahlala ehamba noYehova nasemva kokuba enonyana onguMethusela. Siva ukuba uEnoki waba nentsapho emva kweminyaka emalunga neyi-65. IZibhalo azilichazanga igama lomfazi wakhe kwanokuba ‘wayenoonyana neentombi’ ezingaphi. Ukuba utata ufuna ukuhamba noThixo ngoxa ekhulisa kwaye esebenzela ukondla intsapho yakhe, umele akwenze oko ngendlela kaThixo. UEnoki wayesazi ukuba uYehova ulindele ukuba anamathele kumkakhe. (Genesis 2:24) Waqiniseka ukuba abantwana bakhe ubafundisa ngoYehova uThixo. Kwaba nayiphi imiphumo oko?
IBhayibhile ayisiniki nkcukacha zingako ngale into. Ayithethi nto ngokholo lonyana kaEnoki, uMethusela, oyena mntu waphila iminyaka emininzi kubantu iBhayibhile ethetha ngabo, nowafa ngonyaka kaNogumbe. UMethusela wayenonyana ogama linguLameki. ULameki waphila noyisemkhulu uEnoki iminyaka engaphezu kweyi-100. Wakhula enokholo. UYehova wamphefumlela ukuba aprofete ngoNowa, unyana wakhe. Eso siprofeto sazaliseka emva koNogumbe. UNowa, ngokufanayo nokhokho wakhe uEnoki, nguye kuphela owayehamba noThixo ngexesha lakhe. Akazange ambone uEnoki. Kodwa uEnoki wamshiya nelifa elibalulekileyo. Kusenokwenzeka ukuba uNowa waxelelwa nguyise uLameki ngelo lifa, okanye nguyisemkhulu uMethusela, mhlawumbi nguYaredi, utata kaEnoki, owafa xa uNowa wayeneminyaka eyi-366.—Genesis 5:25-29; 6:9; 9:1.
Cinga ngendlela awayehluke ngayo uEnoki kuAdam. UAdam, ngoxa wayefezekile, wona uYehova waza washiyela inzala yakhe ilifa lemvukelo nosizi. Ukanti yena uEnoki, owayengafezekanga, wahamba noThixo waza washiyela inzala yakhe ilifa lokholo. UAdam wafa xa uEnoki wayeneminyaka eyi-308. Ngaba intsapho ka-Adam yamzilela loo khokho wayishiyela ilifa lokungafezeki? Asazi. Into esiyaziyo kukuba, uEnoki “wahlala ehamba noThixo oyinyaniso.”—Genesis 5:24.
Ukuba unentsapho, jonga into onokuyifunda kukholo lukaEnoki. Nangona kubalulekile ukondla intsapho yakho, okona kubaluleke nangakumbi kukuyondla ngezinto zobuthixo. (1 Timoti 5:8) Loo nto awuyithethi nje ngomlomo kodwa uyayenza. Ukuba uzikhethela ukuhamba noThixo njengoEnoki, uvumele iBhayibhile ikukhokele, uya kunika intsapho yakho ilifa elibalulekileyo—umzekelo enokuwuxelisa.
UENOKI “WAPROFETA NGABO”
UEnoki umele ukuba wazibona inguye yedwa onokholo kwelo hlabathi. Ngaba uThixo wakhe uYehova wayibona loo nto? Ewe wayibona. Ngenye imini uYehova wathetha nalo mkhonzi wakhe. Wamxelela into ekwakufuneka ayithethe kubantu bomhla wakhe. Ngaloo ndlela esiba ngumprofeti wokuqala onomyalezo ekuthethwa ngawo eBhayibhileni. Oku sikwazi ngenxa yokuba uYude, umntakwabo Yesu ngonina, waphefumlelwa ukuba abhale amazwi esiprofeto sikaEnoki kumakhulu eminyaka emva koko. *
Sasithetha ngantoni isiprofeto sikaEnoki? Sasisithi: “Khangela! UYehova weza enamashumi amawaka akhe angcwele, ukuza kuphumeza umgwebo nxamnye nabo bonke, nokuza kubafumanisa benetyala bonke abangenabuthixo ngokuphathelele zonke izenzo zabo ezingezozabuthixo abazenzayo ngendlela engeyoyabuthixo, nangokuphathelele zonke izinto ezothusayo aboni abangenabuthixo abazithetha nxamnye naye.” (Yude 14, 15) Mhlawumbi uyaphawula ukuba uEnoki uthetha ngathi yinto eseyenzekile le. Le yindlela ezabhalwa ngayo nezinye iziprofeto ezininzi ezalandelayo. Eyona nto ithethwayo yile: Lo mprofeti uqinisekile ukuba iza kwenzeka le nto, ngoko uyithetha ngathi seyenzekile!—Isaya 46:10.
Ngesibindi uEnoki wadlulisela umyalezo kaThixo kubantu ababekhohlakele
Kwakunjani kuEnoki ukuthetha loo mazwi, mhlawumbi ngokuwashumayela kubo bonke ababephulaphule? Phawula indlela esasinamandla ngayo esi silumkiso. Sithi abantu babesenza izinto “ezingezozabuthixo,” bezenza ngendlela “engeyoyabuthixo”, nto leyo eyayibangela ukuba babe ngaboni ‘abangenabuthixo.’ Esi siprofeto salumkisa ngelithi abantu ababephila ukususela ekugxothweni kuka-Adam noEva e-Eden babonakele. Abo bantu babejongene nesiphelo esoyikekayo xa uYehova ebatshabalalisa ekunye ‘namashumi amawaka akhe angcwele,’ oko kukuthi imikhosi yeengelosi. UEnoki wasishumayela ngokungenaloyiko eso silumkiso engancediswa mntu! Mhlawumbi uLameki oselula wayebukele, emangaliswe sisibindi sikayisemkhulu. Ukuba kunjalo nyhani, sisiqonda kakuhle isizathu soko.
Ukholo awayenalo uEnoki lunokusenza sizibuze ukuba ihlabathi silibona ngendlela alibona ngayo na uThixo. Umgwebo owachazwa nguEnoki usenjalo nakubantu bale mihla. Njengokuba wayetshilo uEnoki, uYehova wazisa uNogumbe kubantu bomhla kaNowa ababesenza izinto ezingezozabuthixo. Loo ntshabalalo yabonisa indlela eza kwenzeka ngayo intshabalalo enkulu ezayo. (Mateyu 24:38, 39; 2 Petros 2:4-6) Namhlanje, uThixo kunye namashumi amawaka akhe angcwele balungele ukuzisa umgwebo wobulungisa kwabo benza izinto ezingezozabuthixo. Ngamnye kuthi kufuneka ahlale ecingisisa ngesilumkiso sikaEnoki aze axelele nabanye ngaso. Iintsapho zethu nabahlobo basenokungavumelani nathi. Ngamanye amaxesha sisenokuziva singamalolo. UYehova akazange amlahle uEnoki; ibe akayi kubalahla nabakhonzi bakhe abathembekileyo namhlanje!
“WAFUDUSWA KHON’ UKUZE ANGABONI KUFA”
Isiphelo sikaEnoki safika njani? Ngandlel’ ithile, ukufa kwakhe kubangel’ umdla kunobomi bakhe. IGenesis ithi: “UEnoki wahlala ehamba noThixo oyinyaniso. Wandula ke wanyamalala, kuba uThixo wamthabatha.” (Genesis 5:24) UThixo wamthabatha njani? Kamva umpostile uPawulos wathi: “Ngokholo uEnoki wafuduswa khon’ ukuze angaboni kufa, yaye akafunyanwanga ndawo ngenxa yokuba uThixo wayemfudusile; kuba ngaphambi kokufuduswa kwakhe wayenobungqina bokuba wayemkholise kakuhle uThixo.” (Hebhere 11:5) UPawulos wayethetha ukuthini xa esithi “wafuduswa khon’ ukuze angaboni kufa”? Ezinye iiBhayibhile zithi uThixo wamthabathela ezulwini. Kodwa ayinakwenzeka loo nto. IBhayibhile ithi umntu wokuqala owavukela ezulwini nguYesu Kristu.—Yohane 3:13.
Kutheth’ ukuthini ukuthi uEnoki “wafuduswa khon’ ukuze angaboni kufa”? Kusenokwenzeka ukuba uYehova wamfudusela ekufeni ngohlobo lokuba angeva zintlungu zokufa. Kodwa kuqala, uEnoki wafumana ‘ubungqina bokuba wayemkholise kakuhle uThixo.’ Njani? Kanye ngaphambi kokuba afe, mhlawumbi uThixo wambonisa umhlaba oyiparadesi. Wafa enaloo mbono omqinisekisa ukuba wayemkholisile uYehova. Ebhala ngoEnoki namanye amadoda nabafazi ababenokholo, umpostile uPawulos wathi: “Bonke aba bafela elukholweni.” (Hebhere 11:13) Emva koko, kusenokwenzeka ukuba iintshaba zakhe zawukhangela umzimba wakhe, kodwa ‘azawufumana ndawo,’ kuba mhlawumbi uYehova wayewususile, engafuni ziwonakalise okanye ziwusebenzisele ukukhuthaza unqulo lobuxoki. *
Sicinga ngesi sizathu siseZibhalweni, makhe sizame ukuba nombono wendlela uEnoki awafa ngayo. Cinga ngale nto emele ukuba yenzeka. UEnoki wayebaleka, sele eza kudinwa. Iintshaba zakhe zazimleqa, zivutha ngumsindo ngenxa yomgwebo awawuchazayo. UEnoki wafumana indawo yokuzimela waza waphumla okwethutyana, kodwa esazi ukuba ekugqibeleni ziza kumfumana. Wayebona ukuba sele eza kufa. Ngoxa wayephumle, wathandaza kuThixo wakhe. Emva koko waba noxolo lwengqondo. Umbono awawuboniswa nguThixo wamenza wazibona ngathi sele ekuloo paradesi.
Kusenokwenzeka ukuba uYehova wamthabatha uEnoki esecicini lokubulawa ngenkohlakalo
Khawube nombono wakhe ebona ihlabathi elahluke ngokupheleleyo kwelo alaziyo. Njengokuba wayelijongile, lalilihle njengegadi yase-Eden, kodwa kungekho zikherubhi zigade abantu. Kwakuzele amadoda nabafazi, bonke beyimiqabaqaba futhi besemandleni. Babeseluxolweni, kungekho nesuntswana lentiyo nentshutshiso yonqulo awayeyazi kakuhle uEnoki. Wayezibona ethandwa nguYehova kwaye emkholisile. Wayeqinisekile ukuba ngoku, ukowabo. Njengoko wayesiya efumana uxolo lwengqondo, wavala amehlo waza wakobude ubuthongo.
Nanamhlanje ke, usalele ekufeni kwaye uya kuhlala esengqondweni kaYehova uThixo! UYesu wathembisa ukuba kuza ixesha abaya kuthi ngalo bonke abasengqondweni kaThixo balive ilizwi lakhe baze baphume emangcwabeni, babone ihlabathi elitsha elihle nelinoxolo.—Yohane 5:28, 29.
Ngaba ungathanda ukuba lapho? Khawube nombono wakho udibana noEnoki. Cinga ngezinto ezibangel’ umdla aya kusibalisela zona! Unokusixelela enoba indlela esicinga ukuba wafa ngayo yayichanile na. Kodwa kukho into ekungxamisekileyo ukuba siyifunde kuye khona ngoku. Emva kokuba ethethe ngoEnoki, uPawulos uthi: “Ngaphandle kokholo akunakwenzeka ukumkholisa kakuhle [uThixo].” (Hebhere 11:6) Esi sesona sizathu sibangela ukuba sixelise ukholo lukaEnoki!
^ isiqe. 14 Abanye abaphengululi beBhayibhile bathi uYude wacaphula kwincwadi engaphefumlelwanga eyabizwa ngokuba yiNcwadi KaEnoki. Loo ncwadi inezinto ezabhalwa ngumntu ekungaqinisekwanga ngaye kwaye ithetha izinto ezingekhoyo ngoEnoki. Yona ichanile ngesiprofeto sikaEnoki, kodwa naso imele ukuba yasithatha kwizithethe okanye kwiincwadi zakudala ezingasafumanekiyo. Mhlawumbi noYude wasebenzisa kwaezo ncwadi, okanye abe ke wafunda ngoEnoki kuYesu owabona indlela awayephila ngayo uEnoki esezulwini.
^ isiqe. 20 Ngokufanayo, uThixo waqinisekisa ukuba umzimba kaMoses nomzimba kaYesu ayifumaneki ukuze ingonakaliswa okanye isetyenziselwe ukukhuthaza unqulo lobuxoki.—Duteronomi 34:5, 6; Luka 24:3-6; Yude 9.
mailto:?body=UEnoki: “Wayemkholisa UThixo”%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2017010%26wtlocale%3DXO%26srcid=share⊂ject=UEnoki: “Wayemkholisa UThixo”
NO. 1 2017 Unokufumana Okuninzi Xa Ufunda IBhayibhile
mailto:?body=NO. 1 2017 Unokufumana Okuninzi Xa Ufunda IBhayibhile%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fpub%3Dwp17%26issue%3D201701%26wtlocale%3DXO%26srcid=share⊂ject=NO. 1 2017 Unokufumana Okuninzi Xa Ufunda IBhayibhile
“Mntwana Wam Oyintanda Nothembekileyo ENkosini”
“Ndaphakama Njengomama KwaSirayeli”
UBulungiseleli Bethu BoBukumkani